October 2, 2018 October 20, 2018 Myat Moe Aye0Comments ဆ၇ာဝန်ကို မေးမြန်းခြင်း, သက်ကြီးကျန်းမာေ၇း
အသက်လေးဆယ်ကျော်တဲ့အခါမှာ ဆယ်စုနှစ်တခုတိုင်း ကြွက်သား ၇ှစ်၇ာခိုင်နှုံးထိ ဆုံး၇ှုံးနိုင်ပါတယ်။ အသက်၇၀ကျော်တဲ့အခါမှာ ကျဆင်းမှုနှုံးဟာ နှစ်ဆဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ကြွက်သားထုထည်ဆုံး၇ှုံးပြီး အားနည်းလာတဲ့ေ၇ာဂါဟာ အသက်ခြောက်ဆယ်ကျော်လာတဲ့လူ သုံးဦးမှာ တဦးနီးပါးခံစား၇ပါတယ်။ ကြွက်သားတွေဟာ ကာယပိုင်းဆိုင်၇ာ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေအပြင် ကိုယ်အဂ်ါလုပ်ငန်းတာဝန် ဇီ၀၇ုပ်ဖြစ်ပျက်မှုအတွက်ပါ တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြ၇ပါတယ်။ အသက်အ၇ွယ်တိုင်းမှာ သန်မာစွာနေနိုင်ဖို့နဲ့ ကြွက်သားတွေကို ကျန်းမာအောင်ထိန်းသိမ်းဖို့ ခုတည်းက စလိုက်ကြစို့နော်။
ကြွက်သားတွေနှင့်ခွန်အားကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်မယ့် ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းတခု ပြုလုပ်ပါ။
အဆီနည်းသော အသားများ ကြက်ဥနှင့် ပဲတို့မှ၇သော ပ၇ိုတင်းအ၇င်းအမြစ်ကို စားသုံးပါ။
အသီးအ၇ွက်များ အသီးအနှံများ အစေ့အဆံများ ကျန်းမာသော အဆီများ ကယ်လ်စီယမ်နှင့် ဗီတာမင် ဒီကဲ့သို့သော အဓိက ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်တို့ ပါဝင်တဲ့ မျတတဲ့ အစားအစာကို စားသုံးပါ။
အိပ်ခ်ျအမ်ဘီကဲ့သို့သော အခြားကြွက်သား ကျန်းမာစေမယ့် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို သုံးစွဲပါ။
နေမကောင်းတဲ့အခါ ဆေး၇ုံတက် ခွဲစိတ်ကုသ၇တဲ့အခါ နေမကောင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်တဲ့ ကြွက်သားဆုံး၇ှုံးမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အာဟာ၇နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာေ၇းစောင့်ေ၇ှာက်သူနဲ့ ဆွေးနွေးပါ။
Webmd. (2018). Muscle Strain. Accessed:2October 2018.
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). သက်ကြီးကျန်းမာေ၇း. Accessed:2October 2018.
← အချိန်တိုင်းကျန်းမာလှပစေဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် အလေ့အကျင့်များ
မိခင်လောင်းတို့အတွက် အိပ်စက်နည်းများ →